Siminaar heshiisyada Shidaalka ku saabsan oo Kampala ka furmay – Radio Muqdisho
Siminaar heshiisyada Shidaalka ku saabsan oo Kampala ka furmay
Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo xalay gaarey magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa ka maanta ka qeybgalay Siminaar lagu baranaayo qaabka loo abaabulo heshiisyada ku saabsan arrimaha shidaalka.
Siminaarkan oo ay soo qaban qaabisay hay’ad wadamada Afrika ka taageerta shuruucda iyo hanaanka loo galo heshiisyada ku saabsan shidaalka, waxaana mas’uuliyiinta dowladda Soomaaliya ugu qeybgalaysa ka kala socdaan Madaxtooyada, Xafiiska Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya iyo qaar kamid ah wasaaradaha dowladda.
Furitaanka Siminaarkan ayaa mas’uuliyiintii ka hadashay waxaa kamid ahaa Dr Cabduwel Cali Faarax oo ah ku simaha Safiirka Soomaaliya ee dalka Uganda waxaana uu sheegay in Soomaaliya uu qiimo weyn ugu fadhiyo ka qeygalka Siminaarkan isagoo u mahadceliyay hay’addii soo agaasintay Siminaarkan.
“Dadkii heshiisyada lagu soo saaraayo kheyraadka dalka la geli lahaa shirkadaha caalamka mar hadii ay maanta halkan fadhiyaan guul weyn ayay u tahay Soomaaliya” ayuu yiri Dr Faarax.
Dowladda Soomaaliya ayaa waxaa ay ku howlan tahay sidii looga faa’ideysan lahaa kheyraadka dabiiciga ah oo ku jira dalka gaar ahaan shidaalka, waxaana mas’uuliyiin dowladda ka tirsan ay horey ugu qeybgaleen shir caalami ah oo looga hadlaayo kheyraadka dabiiciga ah ee Soomaaliya.